SANTOSH PAUDEL'S BLOG : June 2012
Do For हरित विश्व
'वातावरण दिवस' मनाइरहँदा मलाइ गाउँमा हजुरबाले ठुलाबालाइ भन्नु भएको कुरा स्मरण गरायो- 'यस्पाली मकै क्या री छर्ने हो कुन्नी काका, पानी नै परेन् । पानी क्या री पर्छ त ठुले, पानी पार्ने रुख हलो बनाउँन पहिल्यै काटेर लेराइस क्यारे' !
वास्तवमा हजुरबाले जिस्किएर भनेकै भएपनि उहाँको भनाइमा महत्व र व्यवहारिक सान्दर्भिकता छ । हामीले आज २७ नोवेम्बर मा वातावरण दिवस मनाइरहँदा 'वातावरण' को महत्व र त्यस्को असर कति रै'छ भन्ने कुरा अस्ति गएको माछापुर्च्छे हिम पैरोले नै सब्बैलाइ वाताएको छ । हामी सब्बैलाई थाहा पनि छ, यहि धरातल नै हाम्रो सर्वेसर्वा हो । 'पृथ्वी' र 'मानव जाती' को उत्पत्ती देखिनै 'वातावरण' र 'हामी' विच पारस्परिक सम्बन्ध छ र यस्को संरक्षण गर्ने 'माली' पनि हामि नै हौँ । तसर्थ हामी सब्बैको साथ, सामुहिक सहयोग र समन्वयबाट यस्को संरक्षण तथा संर्द्धन गर्न सक्छौँ । ठुला कुराले होइन, काम र वातावरण सम्बन्धी बनेका नीति नियमहरुलाई कार्यान्वयनमा लेराएर वातावरण हाराभरा र स्वच्छ पार्न सक्छौँ । हामीमा 'कुरा धेरै, काम थोरै, नीति नियम धेरै, कार्यान्वयनको पाटो थोरै' गर्ने परिपाटि रहदै आएको छ । भर्खरै केहि महिना अगाडि नेपाल सरकारले 'फोहोरमुक्त शहर' अर्थात 'सरसफाइ अभियान-२०६८' संचालन मा ल्यायो । केही दिन सम्बन्धित पक्ष, निकाय र सरकारि स्तरबार उपत्यका भरि झ्यालि पिटियो तर आजभोलि जस्ताको तस्तै फोहोर बाटामा थुप्रिएकै छ, जहितहि फोहोर फाल्नेले फालेकै छन् । खोइ त कहाँ गयो अनुगमन तथा मूल्यांकनको पाटो, कहाँ छ नीति नियम । अझ भन्ने नै हो भने बर्षौ देखिको वनविनास, क्रेसरद्धारा गिट्टी उत्खनन्, चुरे माटो उत्खनन जस्ता कृयाकलापलाइ रोकथाम गर्ने कुनै निकाय नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । तसर्थ वातवारण हामि सब्बैको र हामी सब्बै वातावरणमै रहने भएकोले यस्को संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा पनि आउँछ र हामी बसेको वातावरण स्वच्छ, सफा र सुन्दर रहेको खण्डमा हामीलाई नै धेरै फाइदा हुने भएकोले- "विश्वलाई संधै सफा राखौ" नाराका साथ वातावरण दिवसको अवसरमा यो सानो कविता..!
रित्तो आकाश मुनि,
रित्याउँदै छन् 'गोलचक्कर'
अनि बचाँउन खोज्दैछन्
तिम्रो मलिलो, गुणिलो र रसिलो,
'रस' लुटि सकेपछि
तिम्रो जीवन हत्याएपछि
डलर पचाँउने अभियान
सिंगो विश्व वाहाना बनाइ जुट्दैछन्
तिम्रै अस्तित्व लुट्न कतै फुट्दैछन्
कतै एक थोपा पानीका निम्ती
गाऊँ, शहर रुदैछन्
कतै काकाकुल झै,
फुङ्ग आवाज उठ्दैछन्
तिम्लाइ बचाउँने निउमा
जँलाउने औजार किन्दैछन्
दिन दुइ गुणा, रात चौगुना
तिम्रा साथिहरु मर्दैछन्
तिम्रो मृत्युमा, आकाशले
आज आशु झार्न छोड्दैछन्
विश्वले तिम्रो 'खरानी' पर्यावरणमा छर्दै गर्दा,
तिम्लाइ नै बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरुले
तिम्रै 'उत्सव' मनाउँदैछन् !!!!!
Posted by Santosh Paudel at 3:27 AM No comments: Links to this post
गरि त खान देऊ
"गरि खान देउ", विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयात्रा तथा समन्वयमा संचालन भएको Campaign हो । यस अभियानले गरि खान पाउने आम नेपालीहरुको ३ कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ । १. जिऊ धनको सुरक्षा हुनुपर्यो, २. विधिको शासन हुनुपर्यो, ३. स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो पेसा, व्यवसाय र उद्यममा लाग्न पाउनु पर्यो । वास्तवमा यी ३ कुराहरुको आभास कुनै पनि नेपालीले गर्न पाउँछ वा यी ३ कुराहरु प्राप्त गर्ने वातावरण बन्छ भने नेपाली समाजमा आम नेपालीहरुले 'गरि खान' मात्र होइन 'दिएर खान' अवश्व पुग्छ । र, यो भन्दा बढी मलाई यस्को बारेमा तेत्ती राम्रो जानकारी पनि छैन् । तरपनि फेसबुकको ग्रुप र जताततै देखिने पोष्टरले भने जो कसैको ध्यान यस Campaign ले एकचोटी तान्छ नै ! मलाई लाग्छ कार्यक्रमको नामले नै धेरै अर्थ र भाव बोकेको छ र आफै बोल्छ पनि । यस्को बारेमा केही थाहा छैन् भनिरहँदा 'गरि खान देऊ' Campaign को Coordinator दाजु दिलिप र अर्थालयका अग्रज दाजुहरुले नैतिक थप्पड गालाम बजार्छन् नै, मैले यहाँ विषयवस्तुको बारेमा तेत्ति धेरै जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धि कविता लेखेको छु र यथासक्य चाँडो दाजुहरुलाई भेटी यस्को बारेमा जानकार हुनेछु ।
भरी 'मानो' देऊ
घरमा 'छानो' देऊ
एक मुठ्ठी 'सास' देऊ
शान्तिको 'बास' देऊ
छर्कने हात देऊ
एक छाँक 'टार्न'
बालबच्चा 'पाल्न' देऊ
एक सरो 'ढाकी'
खुलेर 'हाँस्न' देऊ
यहि नै गर्छु, यहि नै मर्छु
"गरि त खान देऊ" !!!!
Posted by Santosh Paudel at 2:56 AM No comments: Links to this post
मानिस यस भुमण्डलीकरणको होमो स्पाइस प्राणी (Homo Sapiens) अर्थात 'बुद्धिमान प्राणी' वा 'चेतनशील प्राणी' हो । मानिसमा जन्मजात सोच्न तथा विचरण गर्न सक्ने मष्तिष्क हुन्छ जुन समयान्तरमा विकसित हुँदै जान्छ । मानिसमा विचरणनीयशक्ति, सोचनियशक्ति, चिन्तन र मनन गर्न सक्ने शक्ति प्रार्दुभाव भएको हुन्छ । कुनै पनि विषयवस्तुमा तर्क, अन्तरावलोकन र समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ । यसर्थ, यस संसारमा रहेका हरेक मानिसको आफ्नै एक किसिमको विश्वास र त्यसप्रतिको बुझाइ तथा मौलिक विचार-विमर्श रहेको हुन्छ ।
विश्व २१ औँ शताव्दीमा आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेको छ भने विद्यमान दिनहरूमा प्रत्येक व्यक्ति वा व्यक्तिपिच्छे 'स्वतन्त्र विश्वास' (Liberal Beliefs) र 'पुरातनवादी विश्वास' (Conservative Beliefs) को विचार-विमर्शले आ-आफ्नै महत्व र भाव राखेको छ । प्रत्येक मान्छेहरूले वैयक्तिक जिन्दगीमा उही कुरा चाहान्छ जुन सदियौ वर्ष पहिल्यै पूर्वजहरुले चाहेका थिए वा गरेका थिए । फरक यत्ति मात्र हो— 'ती समयमा भाषा, संस्कृति, समाज र प्रविधिको विकास भएको थिएन भने आज ती द्रुत गतिमा विकसित भइरहेका छन् वा प्राप्त भइरहेका छन् ।
आजको दिनमा हरेक व्यक्तिले 'स्वतन्त्रता' (Freedom) चाहान्छ । 'विकास र समृद्धि' (Development and Prosperity) को मौका चाहान्छ । विश्व नै स्वत:स्फुर्त भुमण्डलीकरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा कुनै पनि कुनामा रहेका हरेक व्यक्तिले सामाजिक भेदभाव, संक्रमण तथा दु:खदायि पीडा जस्ता मानवीय संवेदनाबाट मुक्त चाहान्छ । अझ भनौँ अपराध नहुने शहरको कल्पना जस्तै वास्तविकतामा पनि त्यस्तै चाहान्छ । यी यावत कुराहरूको उत्तर हो— Liberals र Conservative को विश्वास-विचार विमर्श । जुन यस प्रकार रहेको छ :
Oppose long-term welfare.Opportunities should be provided to make it possible for those in need to become self-reliant. It is far more compassionate and effective to encourage people to become self-reliant, rather than allowing them to remain dependent on the government for provisions.
(अंग्रजीमा लिखित विषयहरू Liberal र Conservative विश्वास-विचार STUDENNEWS बाट सावार गरिएको हो)
Posted by Santosh Paudel at 1:45 AM5comments: Links to this post